Blog တစ်ခုကို အမှတ်မထင် ရောက်သွားရာက နေ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ R.I.T တစ်ကျောင်းထဲက အမတစ်ယောက်ရဲ့ blog ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်သူလည်းတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကျောင်းထဲက ကိုယ့်နဲ့ အတန်းကြီး တော့ အမ ပဲပေါ့။ RIT ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ ကိုပုံပေါ်အောင်ရေးထားသာ ကြိုက်လို့ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
အဆောင်သူ အချိူ့ က ငိုမဲ့မဲ့။ DAYကျောင်းသူတွေလဲ မျက်နှာငယ်လေးတွေနှင့်။ အချိန်စောရောက်မှ ရှေ့ ဆုံးတန်းက နေရာရမည်။ ဒီတော့ ကြောက်နေလို့ မဖြစ်။ အားလုံးမျက်နှာက အတင်းအားတင်းပြီး ခြေလှမ်းပြင်သည်။ ကနွဲ့ ကလျ လှမ်းနေလို့ ကတော့ ပိုစနောက်စရာဖြစ်မည်။ ဒီတော့ ခပ်သွက်သွက်လှမ်း။ မျက်တောင်လေးချ ကြောက်ရွံ့ နေပြ လို့ ကတော့ အနီးကပ်စဣူမြားပစ်မှတ်။ ဒီတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ရှေ့ တူရူကြည့်။ မ၀င့်မရဲ မခို့ တရို့ လုပ်နေလို့ ကတော့ နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ပေတော့။ နင်လဲလူ၊ ငါလဲလူ ယောင်္ကျား၊မိ်န်းမ ဘေးချိတ်။ အဲဒီလို စိတ်က ခုလို ပထမနှစ်မှာပဲ မဖြစ်မနေမွေးခဲ့ရသည်။
ဂျီဟောရှေ့ မှာ… ခရေပင်လမ်းမှာ… Lဆောင်နံဘေးမှာ… ကားပတ်ကင်မှာ… နွေးအေးမှာ… နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူတချို့လက်တွဲဖေါ်ချစ်သူနဲ့စာတပုဒ်ကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါဆွေးနွေး… ဘ၀ရှေးရေးကို တိုင်ပင်တဲ့အခါတိုင်ပင်… ချိန်ခွင်ညှာငြှိ။ ကြိတ်ကြွေတို့ အသဲကွဲသံကို လက်ဘက်ရည်တခွက် အေးစက်စက်ဖြစ်တဲ့အထိ ဘော်ဒါအရင်းကြီးတွေမို့ဒုက္ခခံနားထောင်ပေးရတာလဲရှိ။ စာရှင်းကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကွမ်းတယာ လာဘ်ထိုးပြီး စာရှင်းခိုင်း။ အရက်နာကျပြီး မရှုနိုင်မကယ်နိုင်သူတွေကို လွတ်သွားတဲ့စာတွေ ပြန်ရှင်းပြ။ ကဗျာစာအုပ်လေးတွေကိုင်ပြီး ဟိုအတန်းရှေ့ မယောင်မလည် ဒီအတန်းရှေ့ မယောင်မလည်နဲ့ကဗျာစာအုပ်ရောင်းနဲ့ …ခါတိုင်းနှစ်တွေထက် ပိုအလုပ်ရှုပ်တဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်RITကျောင်းသူ။
ဆရာမလာသေးခင် အတန်းထဲမှာ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ဆွေးနွေး။ ဟိုးအဝေးနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဘွဲ့ လွန်ယူနိုင်ဖို့မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့အိပ်စက်ဖို့ မေ့လျော့နေသူ… ဆရာမပြန်လုပ်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့Noteကောင်းကောင်းလေးတွေ စုစောင်းနေသူ… လူအများကြီးကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ဖို့လေ့လာကြိုးစားနေသူ… ကွန်ပြူတာပညာရှင် အရူးအမူးဖြစ်ချင်သူ… တယောက်ရည်မှန်းချက် တမျိုးနဲ့ဘ၀ထဲတာထွက်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်RITကျောင်းသူ။
( Labels: ကျောင်းသားဘ၀ ) Posted by tinkyawoo at 9:57 PM9comments
New Browser (Google Chrome)
Browser! Browser! Browser!.. အင်တာနက်ကြည့်ဖို့ browser တွေမှိုလိုပေါက်နေတဲ့ အထဲ Google ကလည်းလုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ Google Chrome Browser တဲ့ opensource အလကားပေးတဲ့ အင်တာနက်ကြည့် software. ဒါနဲ့ Chrome ဆိုတာဘာလဲ မေးပါအုံး။ Chrom ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ စကားနဲ့ဆိုရင် Graphical user interface တွေရဲ့ ဘောင် အနားသပ် ကိုခေါ်တာပါ။
ကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို tab လေးတွေနဲ့ ခွဲပြီးတော့ အများကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အားတာချက်တွေက တော့ website တစ်ခုပြသနာ တက်ပြီး hung ဖြစ်သွားရင် firefox တို့မျာလိုမျိုး ဖွင့်ထား တမျှ tab တွေ အကုန်လုံး ပိတ်ပြစ်ရလောက်အောင် အခြေနေ ဆိုးတာတွေက နေ ကာကွယ်တားပါတယ်။ ပြသနာတက် တဲ့ tab လေးကိုပဲ ရွေးပြီး ပိတ်လိုက်ရုံပဲ။ Beta version ဖြစ်တာကြောင့် ချွတ်ယွင်းချက်အနည်းငယ် တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Google chrome ကို opensource components တွေနဲ့ တည်ဆောက်ယူထား တာပါ။ Apple က WebKit နဲ့ Mozilla က Firefox ကို အခြေခံထားပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ယူထား တာပါ။ Internet ကြည့်ရှုရာမှာ နောက်ထပ်ရွေးခြယ် စရာ အနေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး web ကို ကောင်းစွာ browse လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ Google နေပြောပါတယ်ဗျာ . . . . ။
( Labels: Software ) Posted by tinkyawoo at 11:51 PM2comments
Packet Tracer, Simulation based learning environment for Networking
Packet Tracer 4.11 isastandalone, medium-fidelity, simulation-based learning environment for networking novices to design, configure, and troubleshoot computer networks ataCCNA-level of complexity. Packet Tracer supports student and instructor creation of simulations, visualizations, and animations of networking phenomena. Like any simulation, Packet Tracer 4.11 relies onasimplified model of networking devices and protocols. Real computer networks remain the benchmark for understanding network behavior and developing networking skills. Packet Tracer was created to help address the "digital divide" in networking education, where many students and teachers lack access to equipment, bandwidth, and interactive modes of learning networking. >> DOWNLOAD HERE <<
( Labels: Software ) Posted by tinkyawoo at 12:46 AM0comments
CCNA Cisco Certification, Learning Books and Exam Guide
Cisco learning guid ICND1 and ICND2. and ExamCram CCNA exam guide. Click images to download books.
( Labels: Library Book ) Posted by tinkyawoo at 12:35 AM0comments
VHDL programming for FPGA hardware Chips
တတ်တဲ့ပညာ မနေတာဆိုသလိုပဲ Electrical Electronic Engineering ဘက်ကို အခုသလော ပြန်လှည့်နေ ဖြစ်တယ်။ အရင်ကတော့် Microtech ကထုတ်တဲ့ PIC Microchip တွေနဲ့ နပမ်း လုံးနေခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာ။ အင်တာနက်လည်း တိတ်အဆင်မပြေ သေးဘူး အဲဒီတုန်းက။ PIC chip ကို program လုပ်ဖို့ hardware programmer ကလည်းဝယ် ရအောင် နိုင်ငံခြားအထိ လှမ်းမှာရမှာ ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ very Dirty hardware programmer လေးတစ်ခု ဆောက်လိုက်တယ်။ ပြီး တော့ ဆောဖ်ဝဲ ထိုင်ရေးရပြန်ရော၊ PIC အတွက် HEX file ကို hardware စီကို send ဖို့။ ဟင်း. . . . i miss those days . . အပူအပင်ကင်းပြီး လုပ်ချင်ရာတွေ အေးအေး ဆေးဆေး လုပ်လို့ ရနေတဲ့ အချိန်တွေပေါ့။
နောက်တော့လည်း Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာလောကထဲကို စုံလုံး ၀င်လာတော့တာပါပဲ။ အခုတော့ Altera ကထုတ်တဲ့ FPGA chip တွေကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ သူ့စီက ထုတ်တဲ့ Altera DE1, DE2 board တွေက အတော်လေးကောင်းတယ်။ တိုးတက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဈေးပေါပေါဝယ်သုံးလို့ရတာပေါ့။ ဒေါလာ 150 ကနေ 450 အထိ မော်ဒယ်ပေါမှာ မူတည်ပြီး ပေးရတယ်။ DE1 board လောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။ မြင်တယ် မှလား Altera DE2 Board?း) အင်မတန် လှပတဲ့ FPGA Board ကိုပုံမှာ ပြထားတာ၊4touch buttons, 12 dip switches,240 pin IO port, RS232, VGA out, Audio In/Out, wow!!! ဒါမျိုးတွေလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အိပ်မက်တောင် အတော်မက်ယူရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရေလည် သဘောကျတယ်။ ၀ယ်ဖြစ်အောင် ၀ယ်အုံးမယ်။ PIC16F84 ကို parallel, serial port တွေဖြည့်ပြီး။ external memory ဖြည့် IO ports တွေထဲ့ပြီး Magic board လေးတည်ဆောက်ဖို့ထိ စိတ်ကူးခဲ့သေးတယ်။
FPGA ဆိုတာကတော့ IC chip လေးကို VHDL, Varilog တို့လို Hardware Description Language နဲ့ program လုပ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် Hardware Devices အသစ်တည်ထွင်နိုင်တဲ့ နည်းပညာရပ်ပါပဲ။ ဒီ post ကို Engineer တွေဖတ်နေတာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အထူးပြောပြနေ စရာမလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ သင်ကိုတိုင် MP3 player အသစ်တီထွင် လို့ရတယ်။ Hardware only Internet Browser လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ VCD player လည်းတီထွင်နိုင်တယ်။ Security Device Control Panel လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ Video capture card, TV tunner Card, ဦးနှောက်ထဲ စဉ်းစားလိုက်၊ အဲဒါတွေ အကုန်လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါမျိုးတွေ အရင်ကလုပ်ရင် ဘယ်လွယ်မလဲ။ 74xxx လို basic Digital Chip တွေနဲ့ နပမ်းလုံးပြီး အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ circuit board ကြီးတွေလုပ်ရမှာ။ ခုတော့ ဒီ digital logic တွေကို VHDL လို language နဲ့ရေးပြီး FPGA IC ထဲ burn လိုက်တာနဲ့ အုံဖွ . . . ပြီးသွားပြီ။
VHDL လေ့လာနေသူတွေ၊ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ပေးထား သလို အခြား အားလုံးသော စာအုပ်တွေကို ညာဘက်ရှိ MyLibrary section ထဲမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
>> အားလုံးတော Engineering စာအုပ်များလိုချင်ရင် CLICK လုပ်ပါ <<
( Labels: Engineering ) Posted by tinkyawoo at 10:58 AM3comments
Microsoft SQL Server 2005, Programming
Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NET, Third Edition
McGraw-Hill/Osborne 2006 (704 pages)
Use this definitive resource to get key concepts, techniques, and best practices to help you take full advantage of stored procedures using SQL Server's native Transact-SQL and .NET CLR languages.
Welcome to Microsoft SQL Server 2005 Stored Procedure Programming in T-SQL & .NET. This book identifies and describes the key concepts, tips, techniques, and best practices the professional developer needs to master in order to take full advantage of stored procedures using SQL Server's native Transact-SQL and .NET compatible programming languages. >> Download Here <<
( Labels: Library Book ) Posted by tinkyawoo at 2:51 AM0comments
How to and where to watch online Videos
Nearly everybody like to watch movies. Some watch CD, DVDs, some goes to cinema, some watch on computer, some watch using computer on INTERNET. Where ever they watch from, we can say they watch movies. Today what I want to tell to people who came and read my blog is about how to and where to watch movies Online on Internet for FREE.
There are lots of web sites where you can watch movies online for free without spendingapenny. Opps! i forgot to tell you about myself. I use to watch moviesalot. Sometimes,4or5moviesaday. :D so, here are the web sites I usually used to watch movies.
My Favorite English movie web site is call ppfilm which is Chinese web site, everything is written in Chinese. But don't worry you will just simply know how to use it. And another one is JAPANESE, KOREAN, CHINESE, HONGKONG movies web site, which is crunchyroll. I will give you lists of web site address at the end of this post. don't worry, keep reading :)
Best of all www.aznv.tv is the best for korean, chinese movies. You will need WinAmp player for aznv, for PPfilm will need to install the player give on it's website.
At last, make sure your internet connection is fast enough to stream smooth video streams to pass around. Not fast enough internet? :D huh! dont worry, just open the video and leave it alone for 1 or2hours!!! it's will just download the whole movie into the player, after that, just click Play again and watch it. Enjoy!!
lists of movie websites
English Korea, Japanese, Chinese, Hongkong Myanmar
( Labels: Movie ) Posted by tinkyawoo at 6:55 AM2comments
New book on ASP.net
ASP.NET စလုပ်မည့်သူတွေ ဒါမမဟုတ် asp.net ရေးသူတွေရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ လိုရင် ဆွဲယူ ကြည့်နိုင်ဖို့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုရမယ်ရ အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်လို့ တင်ထားပေးတာပါ။
အခြားစာအုပ်တွေ ကတော့ ညာဘက်ဘေးက menu မှာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ စုဆောင်း တင်ပေးထားပါတယ်။ (Download)
( Labels: စာအုပ်ကောင်းများ ) Posted by tinkyawoo at 10:55 PM0comments
Bloging from desktop
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပျင်းပျင်းရှိလို့ Microsoft Live Writer ကို စမ်းသုံးကြည့်သာ။ အဆင် တော်တော်ပြေပါတယ်။ post တွေ တင်ရတာ ရေးရတာလည်း တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။ internet connection နှေးနေရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ Internet မရှိတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် စာတွေကြိုရေးထားလို့ ရတယ်။ အင်တာနက် ရှိတဲ့ connection ကောင်းတော့မှ blog ပေါ်ကို လှမ်းပြီး တင်လိုက်လို့ရတယ်။ သုံးချင်ရင် download ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ် http://get.live.com/writer/overview ဘေးကပုံကတော့ Windows Live in Action ပါ။
ဒီ post ကို ရေးပြီးတော့ Publish လည်းလုပ်ရော ပြသနာက စတော့တာပါပဲ။ ပြသနာက publish လုပ်တိုင်း error တက်နေတယ်။ နောက်မှ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ဒီ registry file လေးရပြီး အဆင်ပြေသွားတယ်။ လိုရမယ်ရ ဒီမှာ download လုပ်ပေါ့ Solve Microsoft Live Writer
( Labels: Software ) Posted by tinkyawoo at 10:15 AM0comments
A* Pathfinding ကွန်ပျူတာ လမ်းရှာခြင်း အကြောင်း
Game ထဲမှာ အကောင်လေးတွေ ဟိုသွားဒီလာ လှုပ်ရှားနေတာတွေ ဂိမ်းကစားသူတွေ တွေ့မှာပေါ့။ အဲလိုသွား လာလှုပ်ရှားတတ်အောင်လို့ ဂိမ်းရေးသူတွေက ပရိုဂရမ် လုပ်ထားတာပါ။ အဲဒီပရိုဂရမ်တွေဟာ မျက်ကန်း စုန်မှိတ် ဟိုကနေ ဒီသွား ဒီကနေ ဟိုသွား ဆိုပြီး အသေရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ A.I ဆိုတဲ့ Artificial Intelligent ဥာဏ်ရည်တုနဲ့ တွက်ချက်လုပ်ထားတာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ရန်သူ ဘယ်နားမှာရှိလဲ ဘယ်ကိုသွားသင့် သလဲ။ ဘယ်လိုသွားရမယ် ဒါတွေကို တွက်ချက်ယူလို့ ရပါတယ်။ ကဲ စပြီးတွက်ကြည့်မလား။
မတွက်ခင် ဖော်မြူလာလေး ရေးပေးမယ်၊ အဲဒီ တွက်နည်းကို A* တွက်နည်းလို့ ခေါတယ်။
F = G + H တဲ့
G = တနေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွှေ့သွားရင် ကုန်ကျတဲ့ ကုန်ကျ စရိပ် (မြေပြန့်မှာဆို ၁။ တောင်ကုန်းတက်မယ်ဆို ၃။ ရေထဲဖြတ်လျှောက်မယ်ဆို ၆၊ စသဖြင့်)
H = တနေရာကနေ နောက်ဆုံး သွားလိုရာပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားတဲ့ ကုန်ကျ စရိပ်။
( Labels: AI ဥာဏ်ရည်တု ) Posted by tinkyawoo at 1:57 AM3comments
င်္freelance Artist needed foragame
Hi anybody anyone here, i am looking for an artist, who can draw cartoon characters, for me in developingagame. anyone with any information, please contact mmgamedev@gmail.com . thanks.
ဂိမ်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဂိမ်းကာတွန်း အကောင်လေးများ ဆွဲပေးနိုင်သူ ကာတွန်းဆွဲ သူတစ်ဦး အရေးသကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ကွန်တက် mmgamedev@gmail.com .
( Labels: Job Offers ) Posted by mmgamedev at 2:46 AM4comments
Convert ဖြစ်ခြင်း အကြောင်း
အခုတလော convert ဖြစ်နေပြီ။ Religious convert ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ windows ကိုတက်ရ ဆင်းရတာ စိတ်ဆင်းရဲလို့ linux ပြောင်းသုံးနေတာ။ ubuntu Gusty ကနေ အခု Ubuntu hardy ကိုဆက် သုံးနေပြီ။ တက်ရ၊ ဆင်းရတာ မြန်တယ်၊ တက်ပြီဆိုတာနဲ့ အသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်။
windows မှာဆိုတက်သွားပြီးတာကို ဘာလုပ်နေမှန်းမသိဘူး wait နေရသေးတယ်။ Linux ကို Future လိုအပ်ချက်အရ ထဲထဲဝင်ဝင် ကလိနေတာ။ အခုတော့ expert ပေါက်စတောင်ဖြစ်နေပြီ။ :) Windows applications တွေလည်းတော်တော်များများ ပြန်အသုံးလို့ရတယ် Wine ကိုသုံးပြီး ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
( Labels: OS ) Posted by tinkyawoo at 9:32 PM 1 comments
Game programming and algorithm
C# နှင့် ပတ်သက်သောစာအုပ်များ
Design in Photoshop books
Digital Image Proc: & MatLab books
AI ဥာဏ်ရည်တု (1)